WASHINGTON - Dowladda Maraykanka ayaa is barbar taagtay dowladda Britain, kuna eedeeyay Ruushka in ay halis galinayaan ammaanka adduunka.
Afhayeenka Aqalka Cad Sarah Sanders ayaa sheegtay in Britain ay ku saxantahay ceeyrinta 23-da dublamaasi ee Ruushka.
Afhayeenka ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay in la xaqiijiyo in weerarka kiimikada ah ee la midka ah kii lagu qaaday basaaskii labo kaarlaha ahaa Sergei Skripal uusan markale soo laabanin.
"Falkan ugu dambeeyay ee Ruushka waxa uu ka midyahay dhaqan maalmahan ay caadeysteen oo ah in aysan wax tixgalin ah u heynin shuruucda caalamka, islamarkaasna ay ku xad gudubto qaranimada dalalka" ayay tiri Sarah Sanders.
Nin horey u ahaan jiray sirdoon Ruush ah Sergei Skripal oo 66 jir ah ayaa la qaadsiiyay maaddo sun ah, taas oo neerfaha hawlgab ka dhigta, waxa ay sidoo kale sunta saaqday gabadh uu dhalay Yulia Skripal, labadoonana waxa ay jiifaan isbitaal ku yaala Ingiriiska.
Dowladda UK ayaa Ruushka ka dalbatay in ay sharaxdo sababta keentay in maaddo kiimiko ah oo Ruushka lagu sameeyay weerar looga geysto Ingiriiska.
Balse Ruushka ayaa diiday in uu jawaab ka bixiyo., waxayna UK ka dalbeen in ay keenaan caddeymo rasmi ah oo ku wajahan eedeymaha ay jeedinayaan.
Trump oo sabab la yaab leh xilka uga qaadey Rex Tillerson
Caalamka 13.03.2018. 17:39
Trump ayaa haweenay u magacaabay markii ugu horeysay Taariikhda Agaasiimaha CIA-da...